Ny Empira Sasanida dia empira notapahin' ny mpanjaka tao amin' ny fianakaviana ato hoe Sasanida izay fianakavia-mpanjaka persiana nanapaka tao amin' ny tontolo iraniana tamin' ny taona 224 hatramin' ny taona 651 nidiran' ny Miozolmàna tao. Izany vanimpotoana izany no andro volamena teo amin' io faritra io, na amin' ny zavakanto izany na ara-pôlitika na ara-pivavahana.
Tamin'ny andron'ny Empira Rômana sy ny Empira Bizantina dia isan' ny empira natanjaka tao Azia Andrefana ny Empira Sasanida nandritra ny efajato taona. I Ardasira I, izay nandresy an' i Artabàna IV mpanjaka partiana arsakida farany, no nanorina ny dinastia sasanida, ka tsy nifarana izany raha tsy tamin' ny faharesen'ny "mpanjakan'ny mpanjaka" (emperora) farany atao hoe Iazdgarda III (taona 632-651). Ity farany, taorian'ny efatra ambin'ny folo taona niadiana, dia tsy afaka nisakana ny fandrosoan'ny fakana tany nataon'ny kalifata arabo, izay empira silamo voalohany.
Heverin'ny mpahay tantara ho vanimpotoana isan'ny manan-danja indrindra teo amin'ny tantaran'i Iràna ny andron'ny Sasanida. Amin'ny lafiny maro dia izany vanimpotoana izany no fahatanterahana fara tampon'ny sivilizasiona persiana, ary io no empira iraniana lehibe farany talohan'ny fakan-tany nataon'ny Miozolmàna tao Persia sy talohan'ny fandraisan'ny mponina tao ny fivavahana miozolmàna. Ny fiantraikan' ny kolontsain'ny Sasanida dia niely hatrany ivelan'ny tanin'ny empira, ka nahatratra an'i Eorôpa Andrefana, an'i Afrika, an'i Sina sy an'i India, sady nandray anjara teo amin'ny fiforonan'ny zavakanto eoropeana sy aziatika tamin'ny Andro Antenantenany. Ny faninteraky ny sivilizasiona islamika dia hita taratra nanomboka tamin'ny fakan'ny Miozolmàna an'i Iràna.
Tamin' ny taona 224 taor. J.K. dia nikomy tamin' ny Partiana Arsakida ny mpanjaka Ardasira I izay nofehezin' ny Partiana: resin' i Ardasira I izy ireo tamin' ny ady tao Ôrmoza sady nanangana fianakavia-mpanjaka persiana vaovao, dia ny Sasanida. Azon' i Ardasira I ny fanjakana madinika maro, nanani-bohitra an' i India izy, nampandoa hetra ireo lehibe tany Penjaba sady naka an' i Armenia. Nataony fivavaham-panjakan' i Persia ny zôrôastrisma. Nandimby an' i Ardasira I ny zanany lahy atao hoe Sapôra I tamin' ny taona 241, izay niady indroa tamin' ny Empira rômana, sady naka ny tany tany Mesôpôtamia sy tany Siria ary tao Azia Minora koa. Teo anelanelan' ny tana 260 sy 263 dia votsotra ireo tany azony fa nalain' ilay andriandahy tany Palmira atao hoe Ôdenà izay niaraka tamin' ny Rômana. I Narse no namelona indray ny fifanandrinana tamin' i Rôma nefa resin' ny tafika rômana tamin' ny taona 297 ny tafika nentiny. Voatery nanao fifanarahana tsy hiady i Narse ka nikisaka avy any amin' ny ony Eofrata nankany amin' ny ony Tigrisy (na Tigra) ny sisintany andrefan' i Persia. Lasa koa ny ampahan-tanin' i Persia hafa. Tamin' ny taonjato faha-4 dia niady intelo tamin' ny Rômana sady nandresy azy ireo intelo i Sapôra II ka azony indray ny tany izay efa votsotra tany aloha.
Nisy mpanjaka hafa atao hoe Iazdgarda I izay nanapaka tao anaty filaminana tamin' ny taona 399 hatramin' ny taona 420. Tamin' ny voalohany dia nanome fahalalahana ny fivavahana kristiana tany Persia izy. Taty aoriana anefa dia niverina tamin' ny zôrôastrisma izy ka nanenjika ny Kristiana nandritra ny efa-taona. Nanohy izany fanenjehana izany ny zanany lahy atao hoe Bahràma V izay namaky ady tamin' i Rôma tamin' ny taona 420. Resin' ny Rômana i Bahràma V tamin' ny taona 422. Navelan' ny Rômana halalaka ny fivavahana zôrôastriana eran' ny empira, ka ho takalon' izany dia navela halalaka koa ny fivavahana kristiana tany Persia. Tamin' ny taona 424 dia nanambara ny fahaleovan-tenany tamin' ny Fiangonana tandrefana ny Kristiana persiana.
Tamin' ny taonjato faha-5 dia tonga ny tafika barbarianan' ny Heftalita (na "Hona fotsy") ka namely an' i Persia, dia resin' izy ireo ny mpanjaka Firoza II tamin' ny taona 483 sy nampandoa hetra izy ireo nandritra ny taona vitsy. Tamin' io taona 483 io ihany dia lasa foto-pampianarana ôfisialin' ny Persiana kristiana ny nestôrianisma. Nanome tombondahiny ny fampianaran' i Mazdàka (mpisoron-dehibe zôrôastriana izay nikatsaka ny fampitambatra ny tany) tamin' ny taonjato faha-5 i Kavada I. Tamin' ny taona 498 dia naongan' ny rahalahiny atao hoe Zamaspa i Kavàda I nefa niverina teo amin' ny fitondrana indray tamin' ny taona 501 noho ny fanampian' ny Heftalita azy. Niady indroa tamin' ny tany Andrefana i Kavàda tamin' ny taona 523 nefa tsy nahomby izany ka nitsahatra tsy niaro an' i Mazdaka sady nandringana ny mpanaraka ny fivavahany izy.
I Kôsrô I Anosarvàna zanaka sy mpandimby an' i Kavàda dia nahita fahombiazana kokoa tamin' ny ady nifanaovany tamin' ny emperora bizantina atao hoe Jostiniano I sady nanitatra ny fahefany hatrany amin' ny Ranomasina Mainty sy tany Kaokazy, ka izy no mpanjaka matanjaka indrindra tamin' ireo mpanjaka sasanida rehetra. Nasiany fanatsarana ny fitanatanan-draharaham-panjakana tao amin' ny empira sady naveriny ho fivavaham-panjakana ny zôrôastrisma. I Kôsrô II Abhatveza zafikeliny no nanomboka nanao ady lavareny tamin' ny Empira Bizantina tamin' ny taona 602, ka nandresy sy naka ny ankamaroan' ny tany amin' ny atsimo-andrefan' i Azia Minora sy any Egipta. Voasakan' ny emperora bizantina Herakliosy izany fanitaran-tany izany, ka teo anelanelan' ny taona 622 sy 627 dia nikisaka tany amin' ny nisy azy volohany ny sisintanin' ny Persiana.
I Iazdgarda III no mpankana sasanida farany. Tamin' ny androny (taona 632 hatramin' ny 651) no nidiran' ny Arabo tao Persia ka nandrava ny fanoherana rehetra ary nanaisotra tsikelikely ny zôrôastrisma sy nampiditra ny finoana silamo ary nampiditra an' i Persia tao amin' ny kalifata.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Empira_Sasanida&oldid=1011345"
Dernière modification le 15 Mey 2021, à 07:53
Voaova farany tamin'ny 15 Mey 2021 amin'ny 07:53 ity pejy ity.